ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကျေးဇူးတရား ဆိုရာဝယ်”
this post is one of my favorite and at the time i'm realy appreciate this writer.
မီးပွင့်တယ် ဆိုတာ မီးလာနေတုန်းမို့ ပြောတာပါဗျ၊
မီးမလာတဲ့ အခါကျရင် ဘယ်ပွင့် နိုင်မလဲ။
Yes. Ko PAW! sg no good lah! dont stay here. go back burma.
In my knowledge, you get some benefits from Singapore Gov in one way or another as long as you're SPR. It is like "Biting feeding hands". You can criticize Spore Gov freely asaforeigner. AsaSPR, you can buy house, get cetrain percent of medical benefit, discounts on your baby school etc. Surrender your and your family's PR and you could be totally foreigner to Spore, then you can say about Spore whatever you like with indepedent soul. Now you get some benefits, say bad about it. What do you want? Need more benefits without converting citizenship? Let me educate you about politics... If you wanna fight System, persuade Person in System by givingachance to learn how bad System is. Don't fight / insult People in System. You will fail.
Hi so-called ICA guy,
Who is the one biting the feeding hands? Tax payers are the one who are feeding. PRs are also tax-payers. Everybody can freely criticize the public policies. This is called the freedom of speech and freedom of expression. You can disagree with my view. But you can't supress my view.
For your info, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, one by one, they are changing into more democratic societies. The remaining dictators are just fighting the losing battle.
I think it is freedom-of-barking as you are just insulting people in the system. It will change if System is out-of-balance and if People in System wanna get change. Nothing is eternal. If you really wanna change System, learn and educate yourself about politics. In my opinion, your current way and your current mind-set are not working.
Hi ICA guy,
Using your own words, you should be grateful to me since I let you have freedom-of-barking in my blog.
Yes, there is one thing you are right. If the system is out-of-balance and if the people in the system want to get changed, the system will change. In Burma too, People in the system want to change and the dictatorship will go down by itself someday. But it will take longer time in that way. That is why those people who want to change need to take the initiative. You can see it in every revolution.
Further more, you need to understand the difference between criticizingasystem and insulting the people in the system. These are two different things. When you criticize the Military Junta and its policies, that does not mean you are insulting the Burmese people. The Post itself is explaining about this difference. Read it again.
By the way, I don't think I insult the people in the system in my post. I am even telling you to be grateful to them.
There are times when the people in the system doesn't like the system and wants to change it but the dictators use the brutal and cunning methods and hence the system cannot be changed overnight. It takes time. But it doesn't necessarily mean that you don't need to criticize the public policies. Everybody is entitled to criticize the public policies. That is the correct way of showing gratitude to the people in the system.
အမြင်ချင်း တူပါတယ် ကိုပေါ။
အဲဒီ so-called ” နိုင်ငံတော်” ကြီးက ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ သယံဇာတတွေ ရောင်းစား ကိုယ်ကျိူးရှာပြီး ပြည်သူတွေက သူတို့ကို အတင်း ကျေးဇူးတင်ခိုင်းနေတာတော့ တကယ့်ဟာသပဲ။
စလုံးအစိုးရကို အတင်းကာကွယ်နေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကလည်း ကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ကိုယ် ရတဲ့ ခံစားခွင့်တွေကို အတင်းကြီး လိုက်ကျေးဇူးတင် နေပါလား။ အဲဒ။ိလိုကြေးဆို အလုပ်သမားကိုလည်း အစိုးရကပြန်ကျေးဇူးတင်သင့်တာပဲ။
နောက်ပြီးဗုဒွဘုရားကတောင်မှ ကာလာမသုတ်မှာ ဟောခဲ့တာပဲ။ မှားနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိူးကိုမဆို ဝေဖန်လို့ရတယ်ဆိုတာ။ ကိုယ့်အယူအဆကို တင်ပြတာနဲ့ ကျေးဇူးကန်းတယ်လို့ မပြောသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
I'malittle bit concern that your PR status may not be renew by ICA once it expires.
စိတ်မပူပါနဲ့။ ပီအာရ်ဆိုတာ သက်တမ်းကုန်သွားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်း တခါချပေးလိုက်ရင် တသက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရီအင်ထရီပါမစ်လို့ ခေါ်တဲ့ စင်္ကာပူကို ပြန်ဝင်ခွင့်ပါမစ်ကတော့ ငါးနှစ် တကြိမ်သက်တမ်းတိုးရတဲ့ အရာမျိုးပါ။ အဲဒီ ပါမစ်ကို သက်တမ်းတိုးမပေးရင် ကျနော့်အနေနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံပြင်ပကို ထွက်သွားပြီးရင် ပြန်ဝင်လို့မရပါဘူး။
နောက်ပြီး သူတို့ အစိုးရ ရဲ့ ပတ်ဗလစ်ပေါ်လစီကို ဝေဖန်လို့ ပီအာရ်တယောက်ကို ပီအာရ်အဆင့်အတန်း ရုတ်သိမ်းပြီး နှင်ထုတ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီ လုပ်ရပ်ဟာ စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာနဲ့ ကျန်ရစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီမှာ ပီအာရ်ဆိုတာ မြန်မာတွေချည်းမဟုတ်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံကနေ ပီအာရ်ခံထားကြတာမို့လား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်အနေနဲ့ အဲသည်အခြေအနေကိုလည်း ထည့်တွက်ထားပြီးသားပါ။ မိတ်ဆွေရဲ့ ပူပန်မှုအတွက် ကျေးဇူးပါ။
လေနုအေး ဘလော့ခ်မှာ ဖတ်ပြီး ကိုပေါရဲ့ သမီးလေးက့ အတန်းမှာ (prefect)ဘက်စုံစံပြကျောင်းသူ ဆိုတာသိရလို့ အများကြီး ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကိုပေါတို့မိသားစု ပျော်ရွင်ပါစေ။ သမီးလေးလည်း ဒီ့ထက်မက ထူးချွန်ပါစေ။
Don't be to much optimistic for renewal of PR. Do you remember how SG gov treated PR holder recently.
I know you are brave enough to handle it. But better be prepared for the worst. Just take note that SG gov already marked you as you are follower of your idol Dr Chee.......
Anonymous September 2, 2009 12:35 PM
SO WHAT? IT's none of your F**king business, right?
To Anon :September 2, 2009 12:35 PM
Can't you read what ko paw wrote in his comment? Blind? Did he say any optimistic thing about it?
If you can't read , "Tha-narr dae`" !!!
quote : "Do you remember how SG gov treated PR holder recently."
Ok..can you tell me how they treat them in detail bec i don't know about that.
ICA ဆိုတဲ့လူရဲ့အတွေးအခေါ် ကလည်း အောင်ကြူကြူကြီး။ နေဝင်းခေတ်က idea လိုလို၊ လက်ရှိ စစ်တပ်ရဲ့ idea လိုလို နဲ့။ ဇွတ်ကြီးကျေးဇူးတင်ခိုင်း နေတော့တာပါလား။
ဒီပုံစံ အတိုင်းဆိုရင်တော့ မြန်မာတွေဘဝ လွယ်ဘူး။ မြန်မာတွေကို လက်ခံပီး အလုပ်ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံမှန်သမျှကို ကျေးဇူးအထူးတတင်နဲ့whatever it is, just swallow and sacrifice. လုပ်ပေးရမလိုပဲ့။
ှဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့များကျေးဇူးတရား မသိတတ်လိုက်တာ၊ အင်္ဂလိပ်တွေ မြန်မာပြည်အတွက် အများကြီးလုပ်ပေးခဲ့တာ ပဲကိုး။ အဲလိုပြောချင်တယ်။ ရမလား။
ဟုတ်ပါတယ် ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ ကျေးဇူးမရှိပါ၊ ဘဲစား ဘဲချေပါ၊ ကိုယ့်မာအရေအချင်းရှိလို့ SG မာ နေရာရတာ၊ ဒီလိုပဲ မြန်မာပြည်လဲ ကို့အပေါ် ဘာကျေးဇူးမှ မရှိပါ၊ အမေမွေးလို့ ထွက်လာတာ ကျွေးလို့ကြီးလာတာ အမေပိုက်စံမရှိရင် ပညာတတ်ဖြစ်လာ မတဲ့လား ဘယ်အစိုးရက ကိုယ်ဒီအခြေအနေ ရောက်အောင် မတည်ပေးလို့လဲ၊ ဘယ်နိုင်ငံကမ ကိုယ့်အပေါ်ကျေးဇူးမရှိတဲ့အတွက် ကိုပျော်တဲ့နေရာ ကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာ ကိုနေမယ်၊ ကိုယ့်အပေါ်တကယ်ကျေးဇူးရှိသူတွေကို ထောက်ပံလုပ်ကျွေးမယ်၊ ဒါပဲပေါ့
မိတ်ဆွေကို ပညာတွေ ကျောင်းလခမဆိုစလောက်နဲ့ သင်ပေးလိုက်တာ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာနဲ့ပါ။ အစိုးရအပေါ်မှာသာ ကျေးဇူးမရှိဘူး ပြောလို့ ရချင်ရမယ်။ နိုင်ငံနဲ့ အခွန်ထမ်းပြည်သူတွေအပေါ်မှာတော့ ကျေးဇူးလုံးလုံးမကင်းပါဘူး။
:) ဟုတ်ပ အဲ့ဒီ ရွှေလိပ ကလည်းတမျိုး။ ကြည့်ရတာ သူ့ parents သူ့ ကို abondoned လုပ်သွားလို့ psycho ရနေတဲ့ ခလေးလား မသိ။
ကိုပေါက ၂၀၀၇ထဲက ဒီဘလောက်ရေးတာ ခုထိလဲ စင်ကားပူ မာပဲ၊ ဒီလောက်မကြိုက်တာ နိုင်ငံလေးဘာလေးပြောင်းဖို့စိတ်မကူးဘူးလာ: စလုံးတွေတောင် မကြိုက်လို့ တခြားပြောင်းကုန်ကျပြီ၊ အင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ အရေအချင်းလဲရှိတာပဲ၊ ကျွန်တော်တောင် မြန်မာပြည်ကို နေရတာ စနစ်တွေမကြိုက်လို့ ဒီထွက်လာတာ ကိုပေါစာတွေဖတ်ပြီ: မကောင်းမှန်:သိလို့ ခု ဪဇီကူးမလို့ ကြိုးစားနေတယ်၊ ဒါ့မ မဟုတ် တကယ် မကြိုက်တာ မဟုတ် ရေးစရာမရှိလို့ ရေးနေတာလား? ဒါဆို အင်ဒို ရောက်ရင်ရော အင်ဒို အစိုးရ မကောင်းကြောင်းရေးမာလာ စလုံးမကောင်းကြောင်းပဲ ဆက်ရေးမှာလာ:? ပြောကွယ်?
အခွန်က အဖေတို့အမေတို့လဲ ဆောင်ရတယ်လေ ကိုပေါရဲ့ သူတို့ဆောင်ရတာနဲ့ ရွှေလိပ်တို့ကျောင်းလခ ဘဲစားဘဲချေပေါ့၊ ဒါတောင် မီးမလာပဲ ဆောင်နေရတဲ့ မီတာခတွေ ထည့်မတွက်ရသေးဘူး
Shwe late ( or ) shwe li pa..
you can kiss whoever ass if you wish..no need to advertise here whose ass you are kissing.
သြော် နာမည်က ရွှေလိပ် တဲ့လား ။
ရွှေလိပ် may be justakid. Can see from his/her commented idea. So forgive him/her. LOL.
ကောင်းပါတယ်။ သြော်ဇီကို ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုလို့ အားပေးပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ရှေ့ရေးအစီအမံတွေကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ဆွေးနွေးဖို့ ဆန္ဒမရှိပါဘူး။
စင်္ကာပူရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို မကြိုက်သော်လည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စင်္ကာပူထဲမှာ နေနေရသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ မြန်မာပြည်မှာလည်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကို မကြိုက်ပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာပဲ နေဖို့ ရွေးချယ်ကြသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အထင်ရှားဆုံး ဥပမာပါပဲ။
ရေးစရာမရှိလို ရေးတာလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေးစရာတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ ဟင်းချက်နည်းက စလို့… ဖက်ရှင်…ပန်းချီ.. ကာတွန်း… ရေးစရာတွေ တပုံကြီးပါ။
ဒါပေမယ့် ကျနော်က လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့် အစရှိတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ယုံကြည်သူ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ယုံကြည်သူ၊ အာဏာရှင်စနစ်ကို ရွံမုန်းသူမို့ တဖက်တလမ်းကနေ ဝေဖန်ရေးသားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကျနော်ယုံကြည်တဲ့ တန်ဘိုးတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အဲဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကို ရေးသွားဦးမှာပါ။
အဖေ (သန်းရွှေ) + အမေ (ဒေါ်လိပ် ) = သား (ရွှေလိပ်)
So-called “ICA, September 2, 2009 9:47 AM & September 2, 2009 10:16 AM “
Please identify yourself. What does your “ICA” stand for?
Acronym of “Immigration & Checkpoints Authority of Singapore” is also ICA.
If you are trying to pose asastaff from the ICA, please follow the links below and read them carefully.
Ko Paw and all.....
All comments are interesting.
မွေးကျွေးခဲ့တဲ့ မိဘကျေးဇူးကတော့ အထူးပြောဘွယ်ရာမလို။
အကယ်ရွေ့ အစိုးရကသာ နွေးထွေးစနစ်ကျစွာစီမံခန့်ခွဲသူမှန်ရင် အစိုးရကလည်းကျေးဇူးရှင်ပေါ့..
ပြည်တွင်းကအစိုးရကလည်း သူ့ကိုဖားသူကလွဲရင် ပြည်သူကိုရန်သူလိုမြင်..
အစိုးရကိုယ်စာလှယ်သံရုံးက လည်း ပိုက်ဆံကောက်ဖို့သာ အရေးထားလုပ်နေတဲ့အတွက်...
မြန်မာအစိုးရရော စင်ကာပူအစိုးရပါ မကောင်းကြပါဘုးတဲ့
ဒါပေမဲ့ မြန်မာအစိုးရ၀င်လူကြီးတွေတယောက်ချင်းရဲ့ ပြောပုံဆိုပုံ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း အင်္ဂလိပ်စကားစိတ်ဓါတ် ဥပဓိရုပ် (သန်းရွှေကစလို့ပေါ့...)နဲ့
ဒီကလူကြီးတွေ (လီကွမ်ယုကစလို့ ၀န်ကြီးများ...)နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။. ဘယ်သူတွေကို လေးစားလို့ရလဲတဲ့...